I-60 EPHEZULU YELOG YEKHABININI YOKUCWANGCISWA KWANGAPHAKATHI KWENGCINGA- AMAKHAYA ERETREAT MOUNTAIN - UYILO LWEKHAYA
I-60 ephezulu yeLog yeKhabinini yokuCwangciswa kwangaphakathi kweNgcinga- Amakhaya eRetreat Mountain
Kukho into malunga nobuhle bekhabhathi ye-log eyenza ukuba umntu azive esekhaya: umlilo oqhekezayo, iithoni zodongwe eziqhelekileyo kunye noburhabaxa, kunye nefenitshala ekhululekile, engenazingxabano kunye nomsebenzi wobugcisa kwangoko ubeka umntu ngokukhululeka nakwimeko yakhe yendalo.
Nokuba unethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ungaba ne-retreat yakho yeentaba okanye ujonge nje ukufaka isibheno se-cabin kwikhaya lakho ngeli xesha lonyaka, zininzi iindlela zokuguqula indawo yakho ibeyinto emfutshane kwingqungquthela yakho yabucala.
Kwiminyaka yakutshanje iimagazini zoyilo lwangaphakathi kunye namaqhekeza emibono yokuhlela aye avuma iindumiso zokubonakala nokuziva kwekhabhathi yelog. Ngelixa izinto ezininzi zangaphakathi zale mihla zithathela uxinzelelo olungelulo lwendalo ukujonga kumzuzu nangomzuzu, ikhabhathi yelog izime yodwa kwaye ingachukunyiswanga, kwaye ingaba yeyiphi ingxelo enesibindi kunaleyo?
Ukuphola okutyibilikayo, izixhobo zerustic, izinto eziphindaphindwayo ze-antique, iipaneli zomthi, kunye nokuluhlaza, ii-accents ezingagqitywanga sisiqalo nje; i-cabin yeekhuni ichazwa yinto evakalelwa kwangoko kwaye iyasiqinisekisa. Emva kwayo yonke loo nto, ezi yayizizindlu zokuqala zookhokho bethu, ababengenalo ixesha kunye notyekelo lokuzingqonga ngezixhobo ezingenamsebenzi okanye ezingasebenziyo. Intuthuzelo kunye nokufikeleleka zezona zinto ziphambili kuyilo lwekhabhathi yokungena, kwaye ngethamsanqa izinto ezilulutho zanamhlanje zithetha ukuba ungongeza ukubamba kovakalelo lwangoku kwanesona siseko sangaphambili.
Ukujonga amaxesha axakekileyo esihlala kuwo, isibheno sokuhlala (kunye nesigqibo sokuhlela) isibheno akufuneki simangaliswe. Ngaphandle kokuchaphazeleka kodwa ngandlela thile isephucukile, ingaphakathi le-cabin yangaphakathi yanamhlanje ithembisa ngokhuseleko kwaye iphinde ikhuphe kwintlango ebharhulayo ngaphandle, naphina apho uhlala khona. Nantsi indawo apho ukufudumala, ubuhlobo, kunye nembhobho eshushu yombhobho wekhofi eyomeleleyo yentaba ingumbambo nje.
mens iintyatyambo tattoo isiqingatha imikhono
I-rose kunye nebhabhathane tattoo egxalabeni
ukumkanikazi omncinci wechess piece
iingalo zembambo yomkhono wesiqingatha
umnqamlezo ngamaphiko eengelosi
izimvo zangoku zokuhombisa iofisi yasekhaya
okwangoku ndinyusa itattoo intsingiselo